12/19/2016 - 00:15
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက်၏ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E. MR. WANG GUOSHENG ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက်၏ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Wang Guosheng ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား (၁၉.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ နံနက် (၀၉၀၀) နာရီအချိန်တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
12/14/2016 - 13:57
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မတီနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ(MOU) လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော INGOS အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မတီနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ၎င်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ(MoU) လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော INGOs အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံသည့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို (၁၄-၁၂-၂၀၁၆) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-18) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
12/14/2016 - 13:56
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီနှင့် WOMEN’S INITIATIVE NETWORK FOR PEACE (WIN-PEACE)တို့၏ GENDER BUDGETING FOR WOMEN, PEACE & SECURITY နှင့် ပတ်သက်သည့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီနှင့် Women’s Initiative Network for Peace (Win-Peace)တို့သည် Gender Budgeting for Women, Peace & Security နှင့်ပတ်သက်သည့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ၁၃၀၀ နာရီအချိန်တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီ၊ ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-15) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
12/12/2016 - 13:56
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(မြန်မာနိုင်ငံ)တို့ ပူးပေါင်း၍ “အကျဉ်းထောင်နှင့်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ” ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ တိုင်းပြည်အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်နေသည့် အကျဉ်းထောင်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ကျင်းပသော “အကျဉ်းထောင်နှင့်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ” ဆွေးနွေးပွဲကို နေပြည်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ အဆောက်အအုံ၊ စုပေါင်းခန်းမ၌ (၁၂.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ၁၃၀၀ နာရီအချိန်တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(မြန်မာနိုင်ငံ)တို့က ပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ရာ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအေးသာအောင် တက
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဇော်လင်းထွဋ်နှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအား (၈-၁၂-၂၀၁၆) ရက်နေ့ (၁၂၀၀) နာရီတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-14) ၌ Phoenix Associations ဦးစီး အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီတွင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်နေရာ အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
12/08/2016 - 11:15
ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီတွင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးနေရာ အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
12/08/2016 - 11:00
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီတွင် ဥက္ကဋ္ဌနေရာ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း